Ọkachamara bụ n'efu, akụrụngwa abụghị ... | Martech Zone
Monday, September 25, 2006 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Anọ m n'ụlọ taa. Ahụ adịchaghị m mma - echere m na ọtụtụ, ọtụtụ, ọtụtụ awa ọrụ na nrụgide na-achụ m. Arụkwasịrị m n'ihe ndina ya na ọkụ eletrik. O nwere ike ịka njọ ma ọ bụrụ na mmiri na-ezo ma zoo.
Enwere m oge iji gụọ ma hie ụra n'ụtụtụ a iji nwalee ịma jijiji ọ bụla m nwere. TechZ kwuru na akwụkwọ niile m na-agụ… ọ naghị adịkarị ihe na-erughị 3. M na-agụ 3 ugbu a ma nwee 2 ọzọ na-eche mgbe nke ahụ gasịrị. M n'anya na-agụ. Ọ na-asachapụ isi m ma na-atọ m ụtọ karịa ikiri ihe nkiri ma ọ bụ telivishọn. Ana m agwa ụmụ m na nnukwu ihe gbasara ịgụ bụ na ị ga-ese ihe osise ma ọ bụ ihe nkiri ahụ n'isi gị. Mgbe ọ bụla m gara lee fim e dere banyere akwụkwọ, ọ na-ewutekarị m.
M digress… na m nwere naanị 30 ma ọ bụ nkeji fọdụrụ na laptọọpụ m. Onye agbata obi m nwere ike ịchọta m na mwakpo rawụta ya (enweghị nchekwa, n'ezie). Ka m na-agụ akwụkwọ m wee chee echiche, wee chọọ ide ihe banyere ya.
Nke a bụ m tiori… ọmụma bụ uru dị ka ọ na-adịbu. Na ,ntanetị, ihe ọmụma na-aghọ ihe dị ọnụ ala ma dị ọnụ ala karịa nke abụọ. Oge igo ndị ọkachamara ka ịgwa anyị ihe anyị kwesịrị na-eme dị nnọọ n'azụ anyị. Kama, anyị na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ maka ihe ha nwere ike na-emere anyị.
Ihe omumu na abawanye na uru ma ihe omuma na-ebelata.
Enwere m ihe ọmụma zuru oke iji wuo nnukwu ụlọ ọrụ. Ihe m na-enweghị bụ akụ - oge na ego. Mgbe m gbara ajụjụ ọnụ gbasara ndị na-ahụ maka ọdịiche, ọ bụghịkarị n'ihi ihe ha nwere ike ịgwa m ma ọ bụ enweghị ike ịgwa m. N'ezie, anaghị m aghọta ihe karịa ha karịa gbasara ihe m na-arịọ ha. Ọ bụrụ na ahụ ruru m ala, m na-akwụ ha ka ha rụọ ọrụ ahụ n'aka… maka na ha nwere ike itinye uche ha naanị n'okwu a. Enweghị m ike ịzụ ime nke ahụ.
Ọtụtụ afọ gara aga, m na-arụzi ụgbọala nke m. Emechara m ihe niile m nwere ime n'ụgbọala. Enwere m oge, yabụ aga m azụ akwụkwọ ma kụtuo ya. Ka m na-etolite, ọ naghị atọ m ụtọ ịkpụ aka m ọzọ ka m wee weta ya n’ụlọ ahịa. Ọ bara uru karịa oge m nwere ka onye ọzọ dozie ya karịa m idozi ya. Ọbụna na oke ego nke mmezi ụgbọala.
Nke a ọ bụghị nduzi nke ihe niile na-agagharị? Ka anyị were njikarịcha Search Engine (SEO) dị ka ihe atụ. Obi siri m ike na, nyere oge ahụ, enwere m ike iwuli gburugburu gburugburu sandbox, tweak na nnwale iji hụ otu m ga-esi gbagoo na elu nke algorithms Search Engine ọ bụla. Ma enweghị m oge maka nke ahụ. Chọpụta - ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịgụ blọọgụ wee bido ime nke ahụ. Aghọtara m… mana ọtụtụ mmadụ nwere ike.
SEO ihe ọmụma is n'efu - enwere mkpokọta saịtị SEO na blọọgụ na thatntanetị na-agbasa ule na nchoputa ha. (Ejirila m ole na ole tweaks na saịtị m). M na-adá »‹ ghá »‹ idebe ala SEO Consultants… ha na- bara uru ego ahụ. Mana ha erughị ego ahụ n’ihi nka ahụ ha nwere, ha bara uru ego ahụ dịka akụ bara uru. Ha na-eme ya kwa ụbọchị ka ị ghara ime otú ahụ!
Ịntanetị ahụ is ihe omuma Superhighway. Amaara m na nke ahụ ochie ma pịa, mana ọ bụ eziokwu. Nkesa ihe omuma na adi onu ala. Ọ bụrụ na m chọrọ ịchọpụta etu m ga-esi mesoo akpụkpọ anụ Jack Russell ma ọ bụ na m chọrọ ike ihe Ajax kpuchitere… ọ bụ ihe niile n’ebe ahụ ka m wee chọọ ya.
Dika Net na - ahazi ma dikwa nfe ichota ihe omuma, echere m na odi nkpa ka anyi lee onwe anyi anya dika ndi okacha amara na ndi ozo. Ọkachamara niile dị ebe a ma bụrụ n'efu maka ịnara. Ihe ndi ozo adighi.
Sep 26, 2006 na 10: 26 AM
Echere m na ọdụ nduru a nke ọma na nkwupụta ị na-ewepụta… http://www.telco2.net/blog/2006/09/profiting_from_adjacent_busine.html